माया होस त यस्तो : सुशान्तको सपना पुरा गर्दै अंकिता – Daily NpNews
कुलमानको समर्थनमा प्र’दर्शन : बब्लुलाई नि,र्घात कु,ट्ने प्रहरी अधिकृत माथि छा’नविन शुरु
भर्खरै प्रहरी कै अगाडी यस्तो सम्म भयो, आत्तियो प्रहरी, सबैले घेरे (हेर्नुहोस भिडियो)
यी महिलाका लागि टिकटक बरदान सावित, भयो सपनामा पनि नसोचेको…
किर्तिपुरमा घरबेटीले श्रीमान् मा´रे पछि परिवारको यस्तो बि´चल्ली, श्रीमतीले अब के गरु भन्दै यसरी रु´न्छिन (भिडियो सहित)
सु´शान्तको डायरी भेटिएपछि म’च्चियो स’नसनी, के लेखिएको छ डायरीमा ?….
यस्ता छन् घरमै बसी सजिलै गोरो बन्ने उपाय
पशुपतिमा ला’श जलाउने १८ बर्षीय सपना मगरको मनै रु’वाउने कहानी, आफुजस्तै दु:खी बाउ भेटेपछि… रु’वाबासी चल्यो, फु’टपातमा बसेको क’हानीले मन थाम्नै सकिएन
पा´ठेघर क्या´न्सर भएकी श्रीमतीलाई ब´चाउन राती ३ बजेदेखि भारी बोक्छन् दिलबहादुर ! एक सेयर गर्दिनु होला !
टेलिकमको अफर, ५५ रुपैयाँमा तीन दिनसम्म अनलिमिटेड फेसबुक र युट्युब चलाउन पाइने
हेर्नुहोस आजको राशिफल : वि.सं.२०७७ साल असोज ०२ गते । शुक्रबार ।
मुख्य पृष्ठ /News/माया होस त यस्तो : सुशान्तको सपना पुरा गर्दै अंकिता
माया होस त यस्तो : सुशान्तको सपना पुरा गर्दै अंकिता
17 Less thanaminute
सुशान्तको निधन भएको लगभग ३ महिना हुन लागेको छ । उनको अप्रत्यासित निधनले विश्वभर रहेका उनका फ्यानहरु आश्चर्यचकित बनेका छन् भने सीबीआई उनको मृत्युको प्रकरणको बारेमा बुझ्न लागिपरेका छन् । सुशान्तकी पुर्व प्रेमिका अंकिता लोखण्डेले सुशान्तको परिवारलाई पुर्ण रुपमा साथ दिइरहेकी छिन् ।
अहिले अंकिता सुशान्तको सपनाहरु पुरा गर्न लागेकी छिन् । आइतबार साँझ अंकिता गार्डेनमा भेटिइन् । त्यहाँ उनलाई पापाराजीले घेरे र अनेकौं प्रश्नहरु तेर्साउन थाले । अंकिताले सुशान्तको धेरै सपनामध्ये हजार ओटा बिरुवा रोप्ने सपना पुरा गर्न आएको बताइन् । उनको यो कुरा सुनेर फ्यानहरु निकै खुशी भइरहेका छन् । अंकिता र सुशान्तको दिदी स्वेता कृति सिंहले Plants4SSR भनेर अभियान चलाएका छन् । जस्लाई साथ दिन विश्वभर रहेका फ्यानहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।यसरी छुट्टिएका थिए :
टेलिभिजन क्षेत्रको चर्चित नाम हो मानव र अर्चना ! जी टिभीबाट प्रसारण भएको “पवित्र रिश्ता” बाट यो जोडीको चर्चा घरघरमा भयो । उनीहरु रिल र रियल लाईफमा पनि एकदमै नजिक भए ।
सुशान्त सिंह राजपुत र अंकिता लोखन्डेबाट मानव अर्चना भए ।उनीहरुलाई रियल भने रिल नामले चिन्न थाले । बिस्तारै उनीहरुको प्रेम झांगिन थाल्यो । उनीहरु सेटमा पनि नजिक हुन थाले । एकजना दुईजना हुदै मानव र अंकिता प्रेममा छन् भनेर व्यापक हल्ला भयो । उनीहरुका फ्यानहरु एकदमै खुशी भए । बिस्तारै मानव टेलिभिजन छाडेर फिल्म क्षेत्रमा फड्को मारे । उनीहरु लिभिङ् टुगेदरमा बस्न थाले । अंकिताले आमाले भन्दा बढी माया गरेर राखिन् ।
सरकारले खरिद गरेको रेल सेट आज नेपाल आइपुग्दै…
कुलमान घिसिङको आजबाट बिदाई
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ दोहोरिने निश्चित
कर्मचारीलाई हप्तामा तीन दिन बिदा दिने निर्णय
लोकप्रिय अभिनेता भुवन केसीको आज जन्मदिन